Isiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb | Airbnb®
Uma isivakashi sibanga umonakalo wendawo noma izinto zakho phakathi nokuhlala futhi singakubuyiseli imali, ungase uvikelwe yisivikelo somonakalo wendlu esingafika ku-$1,000,000 USD.
Kusebenza ngokuzenzakalelayo kubabungazi emhlabeni wonke*
Sivikela ababungazi ekungeneni kuze kube sesikhathini sokuphuma
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb singase sivikele:
Umonakalo endaweni yakho odalwe yizivakashi
Umonakalo ezintweni zakho odalwe yizivakashi
Umonakalo odalwe yisilwane esisizayo sesivakashi
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb asivikeli:
Ukwebiwa kwemali nezibambiso (Isib: amabhondi kahulumeli emali ebekelelwayo, amadokhumenti afakazela ubunikazi benkampani)
Umonakalo obangelwa ukuguga
Ukulimala emzimbeni noma umonakalo wempahla ezivakashini noma kwabanye abantu (lokho kungase kuvikelwe Wumshwalense Wokuvikela Ababungazi)
Ungafuna ukuthi izivakashi zakho zidlule ekuqinisekisweni kobunikazi ngaphambi kokuqinisekisa ukubhukha kwazo. Izivakashi zingase zidinge ukuthumela imininingwane yazo ukuze iqinisekiswe yi-Airbnb ukuze iqinisekise, njenge-ID kahulumeni esemthethweni.
Uma kwenzeka isigameko, inkundla yethu ephephile yemiyalezo yenza uxhumane nezivakashi futhi uxazulule izinkinga. Uma isixazululo singafinyeleleki, Isiqinisekiso Sokubuyiselwa senzelwe ukusiza.
Uma kwenzeka okuthile kuwe, empahleni yakho, noma ezivakashini zakho, iqembu lethu Lethimba Elisiza Umphakathi limi ngomumo.
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa sasingenye yezinto eyasiza ukuthatha isinqumo sokujoyina i-Airbnb, ngoba uma kunomonakalo noma izinkinga, nginaleso sivikelo.”
UDennis, umbungazi e-London
Icebiso lokuphepha: Hlola amaphrofayili ezivakashi
Uma ufuna ukwazi okuthe xaxa ngesivakashi ngaphambi kokwamukela isicelo sakhe sokubhukha, hlola iphrofayili yaso noma ufunde okushiwo ngababungazi besikhathi esidlule. Ababungazi nezivakashi bangahlola abakusho komunye nomunye ngemva kokuphuma kwesivakashi, ngakho-ke uyazi ukuthi umbiko ususelwa ekubhukheni kwangempela.
Thola amacebiso okuphepha engeziwe
Indlela yokufaka isicelo sokubuyiselwa imali
1. Hlanganisa ubufakazi bomonakalo
Lokhu kungahlanganisa izithombe, amavidiyo, izilinganiso, kanye/noma amarisidi.
2. Thintana nesivakashi sakho ngeSikhungo Sesixazululo
Ukubuyiselwa imali kungakapheli izinsuku ezingu-14 ngemva kokuphuma noma ngaphambi kokungena kwesivakashi sakho esilandelayo, noma ngabe yikuphi okwenzeka kuqala. Uzoba namahora angu-72 ukuphendula isicelo sakho.
3. Buyiselwa imali noma ubandakanye i-Airbnb
Uma isivakashi singathandi ukukhokha isamba esigcwele, ungase ufanelekele ukubuyiselwa imali ngaphansi kweSiqinisekiso Sokuyiselwa se-Airbnb. Uchwepheshe wosizo uzokuqondisa enqubweni.
Qalisa isicelo sokubuyiselwa imali
Siyini Isiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb?
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb sihlinzeka ngesivikelo esifinyelela ku-$1,000,000 kumbungazi ngomonakalo wendlu evikelwe esimweni esingajwayelekile somonakalo obangelwe yisivakashi odlula ngale kwemali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo noma uma ingekho imali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo.
Uhlelo Lwesiqinisekiso Sokubuyiselwa aluvikeli imali engukheshi nezibambiso, izinto eziyigugu, imisebenzi yobuciko eyivela-kancane, amatshe ayigugu okuhloba, izilwane ezifuywayo noma isikweletu sakho. Situsa ukuthi ababungazi bakhiyele noma basuse izinto eziyigugu lapho beqashisa ngendawo yabo. Uhlelo luphinde lungavikeli ukulahlekelwa noma umonakalo owenzeke empahleni ngenxa yokuguga kwento. Funda kabanzi
Uyini Umshwalense Wokuvikela Ababungazi?
Uhlelo Lomshwalense Wokuvikela Ababungazi luhlinzeka ngesivikelo esiyinhloko uma usephutheni esifinyelela ku-$1,000,000 ngesigameko ngasinye lapho kuba nesimangalo somuntu oseceleni sokulimala emzimbeni noma umonakalo wempahla ohlobene nokuhlala kwe-Airbnb.
Lesi sivikelo singaphansi kwesilinganiso sika-$1,000,000 sendawo yendlu ngayinye, kanye nezimo ezithile, imikhawulo futhi nokungafakwa kungahle kusebenze. Funda kabanzi
Uyini umehluko phakathi Kwesiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb kanye Nomshwalense Wokuvikela Ababungazi?
Uhlelo Lwesiqinisekiso Sokubuyiselwa kanye Nomshwalense Wokuvikela Ababungazi yizinhlelo ezimbili ezingafani ezihlinzekwa yi-Airbnb ukusiza kuvikelwe ababungazi uma kwenzeka umonakalo noma ukulimala komuntu.
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa: Isiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb senzelwe ukuvikela ababungazi esigamekweni esingajwayelekile somonakalo owenziwe empahleni yabo, iyunithi, noma ikhaya yisivakashi esihlala endaweni. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa akuwona umshwalense futhi asithathi indawo yomshwalense womnikazi wekhaya noma womuntu oqashile.
Umshwalense Wokuvikela Ababungazi: Uhlelo Lomshwalense Wokuvikela Ababungazi ngumshwalense, futhi lwenzelwe ukuvikela ababungazi uma kwenzeka kuba khona izimangalo zabantu abaseceleni zokulimala emzimbeni noma umonakalo wempahla. Uhlelo Lomshuwalense Wokuvikela Ababungazi lutholakala kubabungazi kungakhathalekile amanye amalungiselelo abo omshwalense, kodwa luzosebenza kuphela njengesivikelo somshwalense oyinhloko ngezigameko ezihlobene nokuhlala kwe-Airbnb. [Funda kabanzi] (/isihloko/siosizo/938/uyini-umehluko-phakathi-kwesiqinisekiso-sokubuyiselwa-se-airbnb-kanye-nomshwalense-wokuvikela-ababungazi)
Ngikucela kanjani ukubuyiselwa imali ngaphansi Kwesiqinisekiso Sokubuyiselwa?
Ngokuvamile, ababungazi nezivakashi baxazulula izinkinga ngokwabo Esikhungweni sethu Sesixazululo. Uma ungakakwenzi, qala uthinte isivakashi sakho ukuze usazise ngesikhalazo sakho bese uthumela isicelo sokukhokha eSikhungweni sethu Sesixazululo.
Uma ungakwazi ukuxazulula inkinga nesivakashi: Okokuqala, sicela uzijwayelanise nemigomo nemibandela yeSiqinisekiso Sokubuyiselwa. Qaphela ukuthi izicelo kumelwe zithunyelwe ezinsukwini ezingu-14 ngemva kokuphuma kwesivakashi, noma ngaphambi kokungena kwesivakashi esilandelayo, noma yikuphi okwenzeka kuqala. Funda kabanzi
Umshwalense womnikazi wekhaya usebenza kanjani nge-Airbnb?
Umshwalense Wokuvikela Ababungazi we-Airbnb uzosebenza njengomshwalense oyinhloko futhi uhlinzeke ngesivikelo uma usephutheni futhi, lapho kufaneleka, abanikazi bezindlu babo, ngaphansi kwemibandela ethile, imikhawulo kanye nokungafakwa.
Uma unemibuzo ngokuthi lo mshwalense usebenza kanjani nanoma yimuphi umshwalense womnikazi wekhaya noma owomqashi, kufanele uxoxisane ngesivikelo sakho nomhlinzeki wakho womshwalense. Eminye imishwalense ivikela abanikazi bamakhaya nabaqashi ezimangalweni zecala ezithile ezibangelwa ngukulimala kwesivakashi, kuyilapho eminye ingakwenzi. Kuhlezi kuwukuhlakanipha ukwazisa inkampani yakho yomshwalense ngomsebenzi wokuqasha endaweni yakho yize noma isikweletu esivele ngesikhathi sokuhlala kwe-Airbnb kufanele sivikelwe Wumshwalense Wokuvikela Ababungazi. Funda kabanzi
Ingabe Isiqinisekiso Sokubuyiselwa siyasebenza Ezindlini Zezinhlekelele?
Yebo. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb sinikeza umbungazi isivikelo esingafika ku-$1,000,000 somonakalo empahleni evikelwe ezimweni ezingajwayelekile lapho isivakashi senze umonakalo ongaphezu kwenani lemali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo noma uma ingekho imali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa sisebenza kukho konke ukuhlala okubhukhwe ku-Airbnb, kuhlanganise nokuhlala Kwezindlu Zezinhlekelele. [Funda kabanzi] (/isihloko/sosizo/1952/ingabe-isiqinisekiso-sokubuyiselwa-siyasebenza-ezindlini-zezinhlekelele)